MARKA 3.20-35 F. 6, 7 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 3.20-35 F. 6, 7
LAHARAM-PAHAMEHANA HAFA Heverina ho adala.
Efa tafiditra tanteraka anaty asa i Jesoa sy ny mpianany eto ka na ny sakafo tokony hohanina aza tsy voahinana (20). Noho izany fihetsika izany dia noheverin’ny havany ho lasa adala i Jesoa (21). Izany ny fomba fijery maha-olombelona rehefa mahita olona tafiditra lalina ho amin’ny asa fanompoana ka tsy mahatsiaro loatra ny nofo! Mampahatsiahy antsika ilay Tenin’Andriamanitra ao amin’ny 1Korintiana 3.19! Mifanohitra tokoa ny fomba fijerin’olombelona, mifantoka amin’ny ara-nofo sy ny avy amin’Andriamanitra izay misaina ny arapanahy.
Miteny ratsy ny fanahy masina.
Lazain’ny mpanora-dalàna hoe Belzeboba, ilay lehiben’ny fanahy ratsy no ao amin’Ny Tompo (21).Ny filazana ny asan’ny Fanahy Masina hoe avy amin’i Satana toy izao dia miteny ratsy ny Fanahy Masina. Fandavana tanteraka ny hery sy fahefan’Andriamanitra izany. Sarotra amin’ny karazan’olona tahak’izany no hanantena famelan-keloka satria efa mitoetra anaty fahamafisam-po lalina izy (28).
Nifotoran’i Jesoa teo amin’ny fiainany ny hamita ny irak’Andriamanitra (Lioka 4.18-19). Tsy nampandry andro aman’alina Azy sy ny mpianany izany ary namoizany ny ankohonany koa.Tsy azon’ireto havany izay fiheverana izay. Ho an’i Jesoa dia ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra no laharam-pahamehana ka izay zavatra hafa rehetra manohintohina izany, na olona, na zavatra dia hafoiny. Aiza ho aiza ny fahafoizan-tenako ho an’Ny Tompo?
Diniho : “Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy, ary izay tia ny zananilahy na ny zananivavy mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy miendrika ho Ahy”. Matio 10.37